Samy namoaka ny anaran’ireo mpilalao nantsoiny avy i Frank Rajaonarisamba (mpanazatra ny U-23) sy Mosa (Mpanazatra ny Senior) hiatrika izany fanazarantena iraisana izany. Hatramin’ny 23 febroary io fiarahana io.
Ho an’ny sokajy latsaky ny 23 taona dia mpila ravinahitra telo mirahalahy no nantsoin’ny mpanazatra dia i Sedera Randriamparany (La Réunion) sy Ibrahim Hamada ary Tony Mamodaly (Frantsa). Ny fifanintsanana ho an’ny Lalao Olympika, izay hatao any Londres, no homanin’izy ireo amin’izany. Mahatratra 10 kosa ireo mpilalao mpila ravinahitra any ivelany nantsoin’i Mosa hanatevina ny ekipam-pirenena.
Na izany aza anefa dia efa nanamafy ity mpanazatra ity fa « miankina amin’ny fahaiza-manaon’ireo mpilalao avy eto an-toerana ny fihenana na fitomboan’ireo mpila ravinahitra hotazonina ». Isan’ireo nantsoina ry Jean Chrysôstime Raharisona na i Bota (mpiandry tsatokazo atsy La Réunion), Pascal Razakanantenaina na i Bapasy (FC Avion), Beria Franck (Lilie), Valery Rakotoarinosy na i Solo Moto (Seychelles), Mamy Gervais Randrianarisoa (La Réunion), Nomenjanahary Lalaina na i Bolida (FC Avion) ary ireo mpilalao hafa avy any Frantsa toa an’i Johan Paul, Arsène Faed, Claudio Ramiadamanana ary Voary Paulin.